Jekọb gọziri ụmụ Josef (1-12)
A gọziri Ifrem karịa nwanne ya (13-22)
48 Mgbe ihe ndị a mechara, a gwara Josef, sị: “Ike agwụwala nna gị.” Josef wee kpọrọ ụmụ ya ndị nwoke abụọ, ya bụ, Manase na Ifrem, gawa ịhụ Jekọb.+ 2 A gwara Jekọb, sị: “Josef nwa gị abịala ịhụ gị.” Izrel wee gbalịsie ike bilie ma nọrọ ọdụ n’ebe o dina ala.* 3 Jekọb sịrị Josef: “Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile pụtara n’ihu m na Lọz nke dị na Kenan ma gọzie m.+ 4 Ọ sịrị m, ‘M ga-eme ka ị mụọ ọmụmụ ma baa ụba. M ga-eme ka ị ghọọ nnukwu mba,+ m ga-enyekwa ụmụ* gị ala a ka ọ bụrụ nke ha ruo mgbe ebighị ebi.’+ 5 Ụmụ nwoke abụọ a mụụrụ gị n’Ijipt tupu mụ abịakwute gị n’Ijipt ebe a bụ ụmụ m.+ Ifrem na Manase ga-abụ ụmụ m otú Ruben na Simiọn bụ ụmụ m.+ 6 Ma, ụmụ a ga-amụrụ gị, bụ́ ndị ha ga-atọ, ga-abụ ụmụ gị. Ha ga-aza aha ụmụnne ha abụọ a ma keta ala n’ala e kenyere ha.+ 7 Mgbe m si Padan na-alọta, Rechel nọ n’akụkụ m nwụọ+ na Kenan, mgbe anyị ka nọ n’ebe dị anya n’Efrat.+ M wee lie ya n’ebe ahụ n’ụzọ e si aga Efrat, ya bụ, Betlehem.”+ 8 Mgbe Izrel hụrụ ụmụ Josef, ọ jụrụ, sị: “Ole ndị bụ ndị a?” 9 Josef wee sị nna ya: “Ha bụ ụmụ Chineke nyere m n’ebe a.”+ Izrel sịrị ya: “Biko, kpọtara m ha ka m gọzie ha.”+ 10 Izrel na-ahụzi inyoghi inyoghi n’ihi nká. O nweghịzi ike ịhụ ụzọ. N’ihi ya, Josef kpọtara ụmụ ya nso n’ebe Izrel nọ, ya esusuo ha ọnụ, makụọkwa ha. 11 Izrel sịrị Josef: “Atụghịdị m anya na m ga-ahụ gị ọzọ,+ ma Chineke emeela ka m hụ ma gị ma ụmụ* gị.” 12 Josef sizi n’akụkụ ikpere Izrel kpọpụta ha. Josef wee kpọọ isiala. 13 Josef seere Ifrem+ n’aka nri ya, sere Manase+ n’aka ekpe ya ma kpọta ha nso n’ebe Izrel nọ. Ifrem wee nọrọ Izrel n’aka ekpe, Manase anọrọ Izrel n’aka nri. 14 Ma Izrel bikwasịrị aka nri ya n’isi Ifrem n’agbanyeghị na ọ bụ ya bụ nke nta, o bikwasịkwara aka ekpe ya n’isi Manase. Ọ ma ụma bikwasị ha aka otú ahụ n’agbanyeghị na ọ bụ Manase bụ ọkpara.+ 15 O wee gọzie Josef, sị:+ “Ezi Chineke, onye Ebreham na Aịzik nna m hà jeere ozi,*+Ezi Chineke, onye na-azụ m ka atụrụ ná ndụ m niile ruo taa,+ 16 Onye ji mmụọ ozi ya na-anapụta m n’ọdachi niile na-abịara m,+ gọzie ụmụaka a.+ Ka ha zawa aha m na aha Ebreham na Aịzik nna m hà,Ka ha mụbaa ma dị ọtụtụ n’ụwa.”+ 17 Mgbe Josef hụrụ na nna ya bikwasịrị aka nri ya n’isi Ifrem, ọ dịghị ya mma. N’ihi ya, ọ gbalịrị ka o wepụ aka nna ya n’isi Ifrem ma tụkwasị ya n’isi Manase. 18 Josef sịrị nna ya: “Nna m, ọ dịghị mma otú a, n’ihi na ọ bụ onye nke a bụ ọkpara.+ Bikwasị aka nri gị n’isi ya.” 19 Ma nna ya ekweghị. Ọ sịrị Josef: “Nwa m, ama m, ama m. Yanwa ga-aghọkwa mba, ọ ga-abụkwa onye ukwu. Ma nwanne ya nke nta ga-aka ya.+ Ụmụ* ya ga-adị nnọọ ọtụtụ nke na ha ga-aghọ ọtụtụ mba.”+ 20 Ọ gọzikwuru ha n’ụbọchị ahụ,+ sị: “Ka ndị Izrel na-akpọ aha gị mgbe ha na-agọzi ndị mmadụ. Ka ha na-asị,‘Ka Chineke mee ka ị dị ka Ifrem na Manase.’” Otú ahụ ka o si na-akpọ Ifrem aha tupu ya akpọọ Manase. 21 Izrel sịziri Josef: “Anwụwala m,+ ma Chineke ga na-anọnyere unu, ọ ga-akpọghachikwa unu n’ala nna nna unu hà.+ 22 Ma ana m enyekwu gị otu ibé ala karịa nke m nyere ụmụnne gị, ya bụ, ala m ji mma agha m na ụta m nara ndị Amọraịt.”
^ Ma ọ bụ “n’àkwà ya.”
^ Na Hibru, “jere ije n’ihu ya.”